डटहरू जोड्दै | Martech Zone
सोमबार, जनवरी 21, 2008 शनिबार, अक्टोबर 17, 2015 Douglas Karr
चाहे तपाइँ उत्पादन बेच्दै हुनुहुन्छ, एक वेबसाइट धकेल्दै, वा तपाइँका सेवाहरू मार्केटिंग गर्दै ... हामी सबैको स्केचप्याडमा तीन बिन्दुहरू छन् ... अधिग्रहण, कार्यान्वयन, र अवधारणा।
लामो समयको लागि, यी थोप्लाहरू स्वतन्त्र रूपमा ह्यान्डल गरियो। हामीले हाम्रा डिपार्टमेन्टहरू पनि व्यवस्थित गरेका छौं प्रत्येक बिन्दुहरूमा अद्वितीय:
बिक्री विभाग - अधिग्रहण को लागी।
उत्पादन र अपरेशन डिपार्टमेन्ट - कार्यान्वयनको लागि।
ग्राहक सेवा विभाग - अवधारणाको लागि।
जडान विच्छेद भएका कर्मचारीहरू
मुख्य प्रदर्शन सूचकहरू, बजेट, बोनस र यी थोप्लाहरूको व्यवस्थापन नेताहरूमा छोडिन्थ्यो जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आफ्नै साइलोमा बिताए। उनीहरूको दृष्टिकोण र अनुभवलाई जति बढी केन्द्रित गरियो, उनीहरूको नेतृत्वको हामी त्यति मोल गर्छौं। अन्तर्वार्ता पछि तपाईंले भन्नुभएको यो अन्तिम पटकको बारेमा सोच्नुहोस् ... 'वाह, उनी हामीकी छिन् आवश्यक। उहाँ एक सिद्ध हुनुहुन्छ फिट.
तपाईंले कसरी संसाधन विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोच्नुको सट्टा व्यक्तिलाई कसरी कुनामा राख्न चाहानुहुन्छ भनेर तपाईंले पहिले नै एउटा अपेक्षा विकास गर्नुभयो!
मैले यो पहिलो-हातले देखेको छु र त्यस्तै तपाईले पनि! बिक्री कडा मेहनत गर्दछ र बैग एक महान ग्राहक मात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया मा विश्वसनीयता हराउन को लागी। एउटा कम्पनीमा मैले काम गरेको थिएँ, बिक्री टोलीले ग्राहकहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न महिनौं र बर्ष खर्च गर्ने थियो - र कागजातमा एक शब्द पनि नगरी हस्ताक्षर भए पछि उनीहरूलाई हामीलाई हस्तान्तरण गर्थे।
ग्राहक सेवा एक सोचाइको रूपमा प्रवेश गर्दछ ... ग्राहकहरू क्रोधित छन् किनकि अपेक्षाहरू कहिल्यै पूरा भएनन्। ग्राहक सेवा विभाग कम्पनीको म्यागिभर हो, ग्राहकहरूलाई खुशी राख्न बबी पिनहरू र बबल गम एकसाथ तान्दै (वा कम्तिमा शान्त रहन)। यो सबै यस बिन्दुमा अवधारण बारे हो किनकी सस्तो छ किनकि तिनीहरूलाई नयाँ फेला पार्न राख्न सस्तो छ!
उत्पादन यी सबैको लागि बेवास्ता गरिएको छ ... तिनीहरू सोच्छन् कि ग्राहक सेवा हो केवल whiners को एक झुण्ड र बिक्री विभाग मात्र हामी बाहिर के ग्राहकहरु को आवश्यकता के सट्टा के के बेच्नु पर्छ। धेरै चाँडै सबैले कराइरहेका छन् र एक अर्कामा चिच्याइरहेका छन् किनकि यो व्यवसाय गर्नका लागि एक मात्र तरीका छ।
जडानहरूले मार्ग प्रदान गर्दछ
जडानहरूमा कार्य गर्नु भनेको तपाईंलाई सुरू गर्नु आवश्यक छ। सही समय फ्रेममा सही समाधान कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा महारत भएको बिक्री टोलीबाट ह्यान्ड अफले सबै फरक पार्छ र तपाईंको कम्पनीका वास्तविक नायकहरू पनि बनाउँदछ, ग्राहक सेवा विभाग अनावश्यक।
यदि तपाईको कम्पनीले विभागीय पदानुक्रममा काम नलाग्ने नियत छ जुन मोडेल-टी मार्केटमा गए पछि कमसेकम साझा गर्ने, प्रदान गर्ने, शिक्षा प्रदान गर्ने र क्रस-कार्यात्मक रूपमा काम गर्ने उपकरण प्रदान गर्नुहोस्। के तपाईं नेताहरूलाई काममा लिइरहनुभएको छ जो सीमाहरू पार गर्ने तरिका जान्दछन्? तिनीहरू एक अर्काको पछाडिको अनुभव छ? तपाईंको ग्राहकहरूको सफलता यसमा निर्भर गर्दछ - र यस्तै तपाईंको व्यवसाय पनि।
के यो कुनै संयोग हो कि जब कुनै कम्पनीमा सब भन्दा ठूलो बृद्धि हुन्छ जब यो स्टार्टअप हुन्छ? यो सँधै उत्पादन वा सेवा होईन - धेरै पटक यो टोली हो जसले सबै सँगै राख्दछ। जहाँ म काम गर्छु, बिक्री निर्देशक प्रायः मलाई ग्राहकका परिदृश्यहरूको समीक्षा गर्न र समस्या निवारण गर्न मद्दत गर्दछ ... र म दिनदिनै उनीसँग भेट्छु कि कुन कुराको खोजी गर्दैछ भन्ने बारे स्पष्ट समझ लिन।
उसले दिनको प्रायः हाम्रो खाता व्यवस्थापन टोलीसँगै बिताउँछ - ग्राहकहरूलाई उनीहरूले बोर्डमा ल्याएको कुरा के चाहिन्छ भनेर बुझ्नको लागि। सबैले यसको कदर गर्दैनन्, तर म निश्चित छु! आज रात मेरा सीईओले समर्थन फोनहरू प्रबन्ध गरे र हाम्रो अधिक सामान्य समर्थन कलहरू मध्ये एकसँग अड्किए। टेक्नोलोजी निर्देशकको हैसियतले मलाई त्यो अनुभव अनमोल छ किनकि उसले व्यक्तिगत तवरले यस परिस्थितिलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छ।
मलाई यकिन छैन कि म वरिपरि छौं जब हामी एक अर्काको व्यवसायमा जान बन्द गर्छौं। मलाई एउटा सानो कम्पनीको लागि काम गर्न मनपर्छ र हाम्रो टोली यति टाईट छ भन्ने तथ्यलाई मन पराउँछु। हामी क्षेत्रको बारेमा मतलब गर्दैनौं - केवल सफलता।
तपाईंको वेब रणनीतिहरू फरक हुन हुँदैन! जब तपाईंको साइटमा कोही नयाँ आउँछ, तपाईं तिनीहरूलाई कसरी अभिवादन गर्नुहुन्छ? एक मुस्कान र स्पष्ट रूपमा चिन्ह लगाइएको मेनू प्रणालीको साथ? वा विज्ञापनहरूको पूर्ण पृष्ठको साथ र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने मार्ग प्रदान गर्न कुनै नेभिगेशन नेभिगेशन? के त्यहाँ तपाइँलाई भेट्नको लागि त्यहाँ कुनै मार्ग छ? के तपाईंको ब्ल्गको प्रत्येक पृष्ठ एक अवतरण पृष्ठ हो? तपाइँ बहुमत प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन तपाइँको साइट भर भइरहेको हुन्छ गृह पृष्ठ मार्फत त्यहाँ पुग्दैन, हैन?
के तपाईंको उत्पादन विभाग (सामग्री लेखन) को छ को ध्यान केन्द्रित गर्दै छ को आउँदैछ र को तपाईंको साइट छोड्दैछ? थोप्लाहरू जडान गर्नुहोस् र तपाईं अधिक ग्राहकहरू, उत्तम ग्राहकहरू, सटीक अपेक्षाहरूका ग्राहकहरू ... र ग्राहकहरू जो चारै तिर टाँसिरहनुहुनेछ